Daawo: Somaliland Oo Markii U Horaysay Laga Hirgeliyay Qalabka La Socodka Saadaasha Hawadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo: Somaliland Oo Markii U Horaysay Laga Hirgeliyay Qalabka La Socodka Saadaasha Hawadda
Hargaysa (SDWO): Jamhuuriyadda Somaliland ayaa markii u horaysay ku guulaysatay in ay yeelato qalabka lagula socdo saadaasha hawadda, kaasoo maanta si tijaabo ah ay shaqadiisu u bilaabantay kadib markii rakibaadiisu ay muddo ka socotay garoonka diyaaradaha Hargaysa.
Qalabkani ayaa lagu tilmaamay in uu yahay mid aad u casriya oo lagula socon karro hadba sida uu yahay xaalka is-bed-bedelka cimiladda ee guud ahaan dhulka Somaliland Badd iyo beriba, isla markaana looga faa’iidaysan karro sidii loo heli lahaa macluumaadyo kale oo la xidhiidha arrimaha saadaasha hawadda.
Waxaana qalabkani dawladda Somaliland ku caawiyay urur goboleed IGAD, iyadoona shalay la bilaabay hawshiisa tijaabadda ah. kaasoo qayb ka ah mashruuca loo yaqaano Mesa oo ah mashruuc ay wadamadda Afrika oo dhan ku bahoobeen oo lagaga shaqeeyo sidii cimilada loola socon lahaa.
Munaasibad kooban oo loo qabtay dhamaystirka qalabkan la socoshadda saadaasha hawadda oo maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda duulista ee magaaladda Hargaysa, waxaa goob joog ka ahaa wasiirka duulista, agaasimaha waaxda saadaasha ahwadda iyo xubno isugu jiray injiineero iyo khubarro qalabkan rakibay oo ka kala socday IGAD iyo hay’adda ICAO.
Agaasimaha waaxda Cimilada ee wasaaradda duulista Somaliland C/rashiid Cali Xadi, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay qalabkani iyo hawsha ugu muhiimsan ee looga faa’iidaysan doonno.
Sidoo kale Mr. John Asayo, oo ahaa sarkaal ka socday urur goboleedka IGAD kana mid ahaa khubaradii ka shaqaynayay rakibaadda qalabakani ayaa dawladda Somaliland uga mahad celiyay sidii wanaagsanayd ee ay ugala shaqeeyeen rakibaadda qalabkani. Waxa kaloo uu masuulka ka socday IGAD ka sheekeeyay qalabakan iyo nooca hawsha uu qaban doono.
Wasiirka wasaaradda duulista hawadda iyo gaadiidka cirka Somaliland Farxaan Aadan haybe, oo hadal ka jeediyay xafladii daah furka qalabkaasi ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay qalabkani, isla markaana uu wax badan ka tari doono in si fudud loo ogaado xaaaladaha hawadda gobolka.
Farxaan Haybe, ayaa u mahad celiyay urur goboleedka IGAD oo qalabkani ku caawiyay Somaliland iyo hay’adda qaramadda midoobay u qaabilsan la socodka saadaasha hawadda ee ICAO oo gacan ka gaysatay in qalabakan loo rakibo. Waxa kaloo uu wasiirku sharaxaad ka bixiyay baahiyaha kala duwan ee ay doonayaan in qalabkani wax lagaga qabto oo looga faa’iidaysto.
C/rashiid Cumar Jaamac, oo ka socday hay’adda qaramadda midoobay u qaabilsan maamulka hawadda ee magaceedda loo soo gaabiyo ICAO oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan cusubi faa’iido u leeyahay dalka Somaliland.
Daawo Hadaladii Masuuliyiintaasi: